London Archives | Gcina A Isitimela
IYurophu indawo yokuhlangana emangalisayo yeenkcubeko ezininzi ezahlukeneyo - kunye nezithethe zokupheka. Wonke hlanga ubuni balo obahlukileyo, eveza iindwendwe ngqo umlando wawo nayo yonke enye into ngayo inikeza. Yaye kwamanye amazwe, oko kuthetha iziselo elimnandi! labo…
Abathandi taka kufuneka iindawo ezininzi ukuya eYurophu. Ekubeni kanobomi oyikhethileyo, mhlawumbi inxalenye sinzima kukukhetha indawo ekuyiwa kuyo. kunjalo, ukuba ukhangela kutyelela iindawo Europe yinkulumbuso ukuba ukuhlola nobuciko, kutheni uhambo lwakho ngeenxa?…